Anambra Ga-Abụ Steeti Mbụ Ga-Akwụ Ụgwọ Ọnwa Opekata Mpe Ọhụụ -- Obianọ
Dịka ala Nigeria na-agba mbọ ma na-ejikere ịmalite kwụba ndị ọrụ oyibo ụgwọ ọnwa opekata mpe ọhụụ, aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ ekwela nkwà na ya ga-abụ gọvanọ mbụ n'ala Nigeria ga-ebu ụzọ màlite ịkwụ ya bụ ụgwọ ngwa ngwa e binyere aka na ya.
Gọvanọ Obianọ kwuputara nke a oge ya na ndị ọrụ oyibo n'ụlọ ọrụ dị iche iche na steeti ahụ zùtere n'isi ụlọ ọrụ Jerome Udọjị dị n'Awka bụ isi obodo steeti ahụ. O mere ka a mara ezi mbọ ọchịchị ya gbagoro na njikere ọ dị ịga n'ihu n'ịkwalite ọdịmma na ezi obibi ndụ ndị ọrụ na steeti ahụ, dịka o si eme kemgbe ọ batara n'ọkwa ọchịchị, ma bụrụkwa nke o kwuru na ya na-eme site na nkwàdo na ezi mmekọrịta dị n'etiti ndị omebe iwu steeti ahụ.
N'ịgbakwàsà ụkwụ na nke ahụ, ọ gara n'ihu mekwa ka a mara na ya ezutela ma nwee mkparịta ụka, ya na ndị isi òtù jikọtara ndị ọrụ oyibo steeti ahụ bànyere ihe dị iche iche na-akpà ndị ụrọ na steeti ahụ, ma nọrọkwazie ebe ahụ kwuwaa hoohaa n'ihu ndị ọrụ ahụ na Anambra ga-abụ steeti mbụ n'ala Nigeria ga-akwụ ụgwọ ọnwa opekata mpe ahụ bụ 'Minimum Wage', ngwa ngwa e kpebìrì ma kwekọrịta ka a kwụbazie ya.
Ọ sị na ya ga-emezùputakwa nkwekọrịta niile ahụ ha mere ngwa ngwa ọ malitere kwụba ụgwọ ọnwa ọhụụ ahụ. O kwuru ya bụ ụgwọ ọnwa ọhụụ ga-eme ka e nwee mmakwasa nke ihe karịrị otu ìjèrí Naịra na ụma anọ n'ọnụ ego steeti ahụ na-akwụ ndị ọrụ ya, ma kwuo na na-agbanyeghị na nke ahụ abụghị ihe dị mfe, na ya ga-akwụ ya, n'ihi ezi mmasị ahụ o nwere ịkwàlite ọdịmma ndị ọrụ na ya bụ steeti.
Ọ chetakwazịịrị ndị ọrụ ahụ na n'imezùputa ihe niile ndị a, e kwesiri ka e nwee ezi mmekọrịta n'etiti ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu na isi ọchịchị steeti ahụ, dịka e nwere ugbu a, iji hụ na ha ga na-akwàdo amụmà iwu, amụmà ego ọrụ na ezi atụmatụ ndị ọzọ dị iche iche a tụpụtara. N'ihi ya, ọ kpọkuzịrị ma dụọ ndị ọrụ niile ahụ na ụmụafọ Anambra n'izugbe ka ha pụta n'ìgwè, kwàdo ma tụnyere ndị niile ji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị 'All Progressive Grand Alliance' (APGA) apụta ịzọ ọkwa ụlọ omebe iwu steeti ahụ, iji mee ka ya bụ ezi ebumnobi bụrụ nke pụtara ihè, gaa n'ihu ma dịkwa ọkpụtọrọkpụ.